एउटै पुरुषका लागि आमा छोरीको तँछाड मछाड - Nepal's Online News
प्रकाशित मिति : सोमवार, असार २५, २०७५
बुटवल, असार २५। समाजमा लुकेका घटनाहरु खोज्न पनि गाह्रो । खोजेर सञ्चार माध्यममा संप्रेषण गर्न पनि लाजमर्दो । तर नउठाएर पनि के गर्नु ? भित्र भित्रै कतिपयको यौनिक चर्तिकलाले समाजका कतिपय सज्जनहरुलाई लज्जीत पारेको छ । सञ्चार माध्यममा उठाई दिए त्यस्तो चर्तिकला गर्न छाड्थे कि भन्ने स्थानिय समाज सेवीको आग्रह छ ।
किन कि पछिल्लो चरण केहि घटना यस्ता पनि देखिएका छन कि कुरो नबिग्रने वेला सम्म त्यसरी नै स्वागत–सत्कार कुरो विग्रे वलात्कार बन्न थालेको छ । ‘कान’ काण्डमा राम धुलाई हुनु परेको घटना पनि ताजै छ । कृपया पुनः चेतना भया………..
प्रेम सुनारले साझासवाल डटकममा खवर लेख्नुभएको छ ।
दोषीलाई कार्वाहीको माग गर्दै आज देखी अनिश्चितकालीन धर्नामा बसे निर्मलाको परिवार
पिसाब गर्दा टर्च बालेको निहुमा झगडा, चक्कु प्रहारबाट एकजनाको मृत्यु
निर्मलाका सहपाठीले लेखे प्रधानमन्त्रीज्यू, हाम्री साथीका हत्यारालाई कहिले कारबाही हुन्छ ?
कञ्चनपुरमा फेरी एक किशोरी सामूहिक बलात्कृत
झारफुक गर्ने बहानामा धामीले गरे बलात्कार ?